Dowlada Kenya oo ka digtay Qaraxyo dalkeeda ka dhaca Sanadka cusub.
Home»Somali News»Dowlada Kenya oo ka digtay Qaraxyo dalkeeda ka dhaca Sanadka cusub.
Facebook	Twitter	Thursday, December 13 2012	Dowlada Kenya oo ka digtay Qaraxyo dalkeeda ka dhaca Sanadka cusub.	Written by Admin
Add comment	Nairobi ( SPR ) : Dowlada Kenya ayaa ka hadashay Adkaynta Amaanka Dalkeeda Xili ay dhowdahay dabaal degyada ay dadka haysta Diinta Krishtanka ay u sameeyaan Sanadka cusub,Waxaana ay ka digtay weeraro Argagixiso oo dalkeeda ka dhaca.
Dowlada Kenya ayaa xustay in ay heleen laamaha sirdoonka dalkeeda warar ku aadan weeraro ay Alshabab iyo Al qacida ay ku damacsan yihiin in ay ka fuliyaan Kenya bilowga sanadka cusub,gaar ahaana xiliyada ay Dabaal degyadu socdaan.
Mid kamid ah Gudoomiyayaasha Degmooyinka ee dalka Kenya ayaa sheegay in ay qabteen ilaa 10 qof oo doonayay in ay weeraro Argagixiso ka fuliyaan gudaha Dalka Kenya,laguna qabtay Magaalada Gaarisa.
Kooxda la qabtay ayaa la sheegay in ay doonayaan weeraro Argagixiso oo ay ka fuliyaan gaarisa,gaar ahaana maalinta Madaxbanaanida wadankaasi.
Dalka Kenya ayaa noqday mid u nugul qaraxyada iyo weerarada lagu beegsanayo ciidamadooda iyo Saraakiisha dalkaasi,Waxaana ay Dowlada Kenya ay sheegtay in ay beegsanayso cid kasta oo ay ku tuhunto in ay ku lugu leeyihiin Argagixiso.
Dadka Soomaalida ee Dalka Kenya ku dhaqan ayaa noqday ugu ay baqdin badan soo wajahday,maadaama ay Dowlada Kenya ay inta badan la xiriiriso cida ay qabanayso Alshabab.
Alshabab waxaa ay horay hanjabaadyo ugu dirtay Dowlada Kenya,gaar ahaana in ay kaga Aargudanayso weerarkii ay Ciidamadeeda kusoo qaadeen gudaha dalka Kenya.
Dowlada Kenya ayaa ka hadashay Adkaynta Amaanka Dalkeeda Xili ay dhowdahay dabaal degyada ay dadka haysta Diinta Krishtanka ay u sameeyaan Sanadka cusub,Waxaana ay ka digtay weeraro Argagixiso oo dalkeeda ka dhaca.
DHAGAYSO : Alshabab oo u hanjabay shacabka Kenya xili ay u dareereen cod bixinta Doorashada.
DHAGAYSO : Kenya oo looga dareeray cod bixinta Doorashada Madaxtinimo ee dalkaasi.
SAWIRO : Safiirka Soomaalida ee dalka Kenya oo booqday dhalinyaro lagu tuhun san yahay Burcad badeed oo ku xiran Mombasa.
Wasiirka Gaashaandhiga dalka Kenya oo ku dhaliilay Soomaalida lacagta laaluushka ah ee ay bixiyaan.
« WARAYSI : Maamulka Gobolka Sanaag oo bilaabay qaadista Canshuuraha iyo baaq maamulkaasi u jeediyay Qurba joogta.	DHAGAYSO : Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay Arimo badan oo Xaalada Dalka iyo Xiriirka ay leeyihiin Kenya »